Blogger | Saturngod
Blogger.com with Unicode
Leaveareply Blogger.com မှာ လက်ရှိ မြန်မာ ၊ မွန် ၊ ရှမ်း စတဲ့ unicode ရေးနေသည့်သူများ font embed ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာကို အောက်က website မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါသည်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Blogger, myanmar, Unicode on September 19, 2012 by saturngod. Evan Williams
2 Replies Evan Williams ကို 31 March 1972 နှင့် အမေရိကန် Nebraska တွင် မွေးဖွားသည်။ သူဟာ Internet Company များစွာကို တည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
Evan Williams နှင့် Meg Hourihan တို့ ပူးပေါင်းပြီး Pyra Labs ကို project management software အတွက် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဲဒီဟာက blogger ဆိုတာကို ဖြစ်စေလာ စေမယ့် အကြောင်းပါပဲ။ Blogger ဟာ ပထမဆုံး web applications ဖြစ်ပြီး blog တွေ ဖန်တီးခြင်းနှင့် စီမံခြင်းတို့ ကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Williams ဟာ blogger ဆိုတဲ့စကားလုံးကို တီထွင်ခဲ့ပြီး blog ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူကြိုက်များပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Pyra ဟာ Hourihan နဲ့ အခြား အလုပ်သမားများ ထွက်ခွာပြီးနောက် မနည်းရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။ 17 February 2003 မှာတော့ Pyra ကို Google ဆီမှာ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Google ကနေ October 2004 တွင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး Odeo ကို ပူးပေါင်းပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Obvious Corp (http://obvious.com) ကို Biz Stone နဲ့ အတူပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်။ Odeo က အရင်တုန်းက အလုပ်သမားတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ Obvious Corp ဟာ Odeo Inc , Twitter အပြင် အခြား Willams စခဲတဲ့ project တွေကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ် ။ Apirl 2007 မှာ Obvious Corp မှ Twitter က ခွဲပြီး ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Sonic Mountain ဟာ Odeo ကို May 2007 တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ PC Magazine မှာ Evan Williams, Paul Bausch and Hourihan တို့ကို Blogger team ရဲ့ People of the Year (http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1744185,00.asp) in 2004 လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Williams ဟာ Twitter မှာ 2008 တွင် CEO တာဝန်ကို twitter တီထွင်သူ Jack Dorsey မှ လွှဲယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ချက်ခြင်းဆိုလို ပြည်တွင်း အသုံးပြုသူတွေ ကြည့်ရှုသူတွေ အမြောက်အများရရှိခဲ့ပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged bio, Blogger on June 22, 2009 by saturngod. MZ blog
1 Reply wordpress မှာ blog လုပ်တာ မြန်မာလို မပေါ်ဘူး။ နောက်ပြီး plugin တွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ plugin မရဘူးဖြစ်နေလား။ wordpress blog ကို ကိုယ်ပိုင် host မထိုင်တတ်ဘူးလား။ blog လုပ်ချင်ပြီး ဘယ်ကနေ စလုပ်ရမှန်းမသိတာလား။ အဲဒီအတွက် MZ blog လာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ MYSTERY ZILLION ကပေးလိုက်တဲ့ နောက်ထပ်တစ်ခုပါ။ Blog တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ template တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ plugin တွေထည့်သွင်းထားပေးတယ်။ blogger ကနေလည်း import လုပ်လို့ရတယ်လေ။ www.mzblog.net ကနေ သင် blogger တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ လမ်းစ တစ်ခု ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Project and tagged blog, Blogger, MZ on August 23, 2008 by saturngod. Search for:
Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world? — Steve Jobs Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod